31 ဘာသာပါတဲ့ Dictionary ပါ . စိတ်ဝင်စားမယ် ထင်ပါတယ် . အရင်က တောင်းခဲ့ဖူးလို့ အခု တင်ပေးလိုက်တာပါ .
Download ifile.it ၊ Download mediafire @nyinaymin